Fahasamihafana eo amin'ny alikaola Cetyl sy alikaola Stearyl | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny alikaola Cetyl sy alikaola Stearyl | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / simia / Simia biolojika / fahasamihafana eo amin'ny toaka Cetyl sy alikaola Stearyl
Fahasamihafana eo amin'ny alikaola Cetyl sy alikaola Stearyl
4 Novambra 2019 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny alikaola cetyl sy alikaola stearyl dia ny alikaola cetyl manana atôma karbonika 16, fa ny alikaola stearyl kosa manana atôma karbonika 18 .
Ny anarana hoe alikaola cetyl dia avy amin'ny loharano voalohany: menaka trozona sperm. Ny teny latinina hoe menaka trozona dia Cetus. Saingy, ny famokarana maoderina dia mampiasa menaka palmitika ho loharanon'ny alikaola cetyl. Ny alikaola stearil kosa dia vokarin'ny asidra stearika . Samy alikaola matavy ireo.
2. Inona ny toaka Cetyl
3. Inona no atao hoe Alikaola Stearyl
4. Fampitahana mifanila - Alikaola Cetyl vs Alikaola Stearyl amin'ny endrika Tabular
Inona ny toaka Cetyl?
Ny alikaola Cetyl dia alikaola matavy misy atôma karbonika 16 isaky ny molekiola. Ny anaran'ny IUPAC an'ity fitambarana ity dia hexadecane-1-ol. Ny endrika simika amin'ity fitambarana ity dia CH 3 (CH 2 ) 15 OH. Amin'ny maripanan'ny efitrano mahazatra, io fitambarana io dia misy toy ny savoka fotsy mangirana. Indraindray dia mitranga toy ny flakes. Ankoatr'izay, io fangaro io dia manana fofona maivana ihany koa.
Sary 01: firafitry ny simika amin'ny alikaola Cetyl
Ny anaran'io fitambarana io dia avy amin'ny menaka trozona satria ny anarana latinina ho an'ny trozona dia Cetus. Izy io dia satria ny menaka whale no loharanon'io alikaola io. Ny famokarana maoderina dia misy fihenan'ny asidra palmitika. Eto, ny asidra palmitika dia avy amin'ny menaka palmie.
Mikasika ny fampiasana azy, ny alikaola cetyl dia zava-dehibe amin'ny alàlan'ny opacifier ho an'ny shampoo, singa iray amin'ny indostria kosmetika, ho emulsifier, ho mpamatsy matevina, sns.
Inona ny alikaola Stearyl?
Ny alikaola Stearyl dia alikaola matavy misy atôma karbonika 18 isaky ny molekiola. Ny anarana stearyl dia avy amin'ny loharano, asidra stearika. Ny raika simika an'ity fitambarana ity dia azo omena ho CH3 (CH2) 16CH2OH. Ankoatr'izay, io fitambarana io dia misy granula fotsy na toy ny flakes. Ambonin'izany, io fitambarana io dia tsy voavahan-drano.
Sary 02: firafitry ny simika amin'ny alikaola Stearyl
Rehefa mandinika ny fampiasana an'io fitambarana io dia zava-dehibe amin'ny fametahana menaka manitra, resina , ranomanitra, sns. Ny hydrogenation catalytic an'ny stearic acid dia ny dingana ampiasainay amin'ny fizotry ny famokarana alikaola stearyl. Koa satria mampiasa asidra stearika isika amin'izany, ny alikaola stearil dia manana poizina ambany.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny alikaola Cetyl sy alikaola Stearyl?
Ny alikaola cetyl na alikaola Stearyl dia alikaola matavy. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny alikaola cetyl sy alikaola stearyl dia ny alikaola cetyl manana atôma karbonika 16, fa ny stearyl alikaola kosa dia misy 18 atôma gazy. Ny refy simika amin'ny alikaola cetyl dia CH3 (CH2) 15OH raha ny endrika simika an'ny alikaola stearyl kosa dia azo omena ho CH3 (CH2) 16CH2OH. Ny anaran'ny IUPAC misy alikaola cetyl dia hexadecane-1-ol raha ho an'ny toaka stearyl kosa dia octadecan-1-ol.
Amin'ny ankapobeny, ny alikaola cetyl dia misy toy ny waxy fotsy mivaingana ary ny alikaola stearyl dia misy granula fotsy na flakes. Noho izany, azontsika atao ny mihevitra ny fisehoana ho fahasamihafana bebe kokoa eo amin'ny alikaola cetyl sy alikaola stearyl. Ankoatr'izay, ny anaran'ny alikaola cetyl dia nalaina avy tamin'ny loharano voalohany, ny menaka trozona. Ny anaran'ny alikaola stearil dia avy amin'ny loharano, asidra stearika.
Rehefa mandinika ny fizotran'ny famokarana, ny famokarana alikaola cetyl dia misy ny fampihenana ny asidra palmitika raha ny famokarana, ny alikaola stearyl kosa dia misy hidrôdrômanan'ny catalytic acid stearic. Ankoatr'izay, ny alikaola cetyl dia ilaina amin'ny indostria ho opacifier ho an'ny shampoo, ho toy ny akora ao amin'ny indostria kosmetika, ho emulsifier, ho mpamatsy matevina, sns. resina, ranomanitra sns. Ankoatr'izay, azontsika ampiasaina izy io ho emulsifier sy mpamatsy matevina amin'ny famokarana menaka manitra.
Ity ambany ity dia tabilao iray izay manondro ny maha samy hafa ny alikaola cetyl sy alikaola stearyl.
Famintinana - Alkoholika Cetyl vs Alkoholahy Stearyl
Ny alikaola cetyl na alikaola Stearyl dia alikaola matavy. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny alikaola cetyl sy alikaola stearyl dia ny alikaola cetyl manana atôma karbonika 16, fa ny alikaola stearyl kosa manana atôma karbonika 18. Noho izany, ny anarana IUPAC misy alikaola cetyl dia hexadecan-1-ol. Ny anaran'ny IUPAC an'ny stearyl alkohol dia octadecan-1-ol.
1. "Alikaola Stearyl." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 25 Aogositra 2019, Hita eto .
2. “Alikaola Cetyl.” Wikipedia, Foundation Foundation, 19 sept. 2019, Azo jerena eto .
1. “rafitry ny alikaola Cetyl” Nosoratan'i Хорев Сергей - Asa manokana (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. “1-Octadecanol” Nosoratan'i Krakatit - Asa manokana (Public Domain) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny 1-Butyne sy 2-Butyne Fahasamihafana eo amin'ny kôntôlôjika sy ny heterôklika Fahasamihafana eo amin'ny EDG sy EWG Fahasamihafana eo amin'ny Flavonoids sy Polyphenols Fahasamihafana eo amin'ny asidra Benzoic sy Ethyl Benzoate
Fahasamihafana eo amin'ny Circic Zirconia sy Diamond
Fahasamihafana eo amin'ny famoahana be loatra sy ny fanonganana be loatra any Java
Fahasamihafana eo amin'ny ra sy ny fiterahana
Fahasamihafana eo amin'ny BA sy MA
Fahasamihafana eo amin'ny fitantanana ny fananana sy ny fitantanana harena